Sivalelwe amanzi isikole esikweleta uMasipala | News24
Sivalelwe amanzi isikole esikweleta uMasipala
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaAbafundi baphuma kungakashayi isikhathi ngenxa yokungabikhona kwamanzi.
Umphathiswa woMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Kwazi Mshengu uthe amanzi azovulwa ngokushesha kule sikole kulandela izingxoxo uMnyango obe nazo neMeya. Uthe bazobe sebehlangana bexoxisana ukuthi kungabe bazosikhokha kanjani lesi sikwelethu.
“Sikhathazekile ukuthi isikole singakweleta imali enkulu kangaka. Lena into ngempela ekumele siyidingide ngoba indlela umasipala [okhokhisa] ngayo kumele idingidwe kanjalo nengqalasizinda nayo kumele kuhlolwe ukwenza isiqiniseko sokuthi akukho yini ukuvuza kwamanzi okukhona kamasipala.
“Akuwenzi umqondo ukuthi isikole singakweleta imali ecishe ibe izigidi ezimbili (2million),” kubeka yena.
Ngokwesitatimende esikhiswe ibamba lokhulumela umasipala uMsunduzi uNks Ntobeko Ngcobo, umasiplala ukuqinisekisile ukuthi isikole sikweleta imali engu-R2 million nokuthi umasipala uwavalile amanzi kulesi sikole.
Uthe lesi sikole sagcina ukukhokha kamasipala ngenyanga kaMbasa (April) 2019.
Sithe umasipala bewulokhu uzama ukuxoxisana nesikole ukuthi size ngaphambili senze izinhlelo zokuthi sizokhokha kanjani. Incwadi yokugcina eya thunyelwa kulesi sikole bekuyinyanga kaLwezi ( November) kodwa isikole asizange size siphendule.
“Imeya uKhansela Mzimkhulu Thebolla [uxoxe] noMphathiswa wezeMfundo, [ukuthi] kweziwe izinhlelo mayelana nesikweleti kwabe sekuvunyelwana ngokuthi amanzi azovulwa esikoleni,” kufunda isitatimende. IMeya uMnu Thebolla uthe bebengaqondile ukuphazamisa ukufunda kwezingane. Uthe bebenethemba lokuthi isikole sizoza kubona kwenziwe izinhlelo zokuthi sizokhokha kanjani, kodwa asizanga.
Izingane zilindeleke ukuba zibuyele esikoleni namhlanje (ngoLwesine).